Khaadleyda u barooraneysa suuqa Soomaaliya oo culeyska ku kordhiyey Uhuru
Khaadleyda u barooraneysa suuqa Soomaaliya oo cadaadinaya Uhuru
NAIROBI, Kenya – Wasiirka Beeraha Kenya, Peter Punyo, ayaa waydiisatay khaadleyda dalkaas in aysan dhageysan hadalada siyaasiyiinta ayna fursad u siiyaan labada dowladood xal wada ogol kuna wajahan is-mari-waaga.
Munya ayaa wariyey in ay jiraan shaqsiyaad u sheegay khaadleyda in dowlada Uhuru Kenyatta ku fashilantay latacaalida qadiyadan isla markaana xalkooda uu ku jiro in ay isu soo bax sameeyaan todobadka soo aadan.
Beeraleyda ayuu u xaqiijiyey in Uhuru uu sameynayo wax kasta oo karaankiisa si uu dib ugu furo suuqa ay ku tiisnaayeen ee Soomaaliya.
"Hadii isaga [Uhuru] uu dhageystay oohintiina markii gobolada ay mamnuuceen [maandooriyaha] ayna joojiyeen, isaga waxaa ku waajib ah in uu sida ugu dhaqsiyaha badan idin kugu furo suuqyada. Madaxweynaha wuu og-yahay dhibaatada beeraleyda miiraha. Miiraha wuxuu leeyahay cadow badan, waa in aan ka taxadarnaa," ayuu u sheegay warbaahinta gudaha.
Kimathi Munjuri, gudoomiyaha iskaashada khaadka Kenya, ayaa u sheegay The Star in ay ka shirayaan talaabada xigta oo ay ku doonayaan in ay ku cadaadiyaan dowladda si ay u dedejiso qorsheyaasha furida suuqyadda.
Xildhibaanka bartamaha Igembe ee Kubai Kiringo ayuu xusay in uu baarlamaanka u gudbinayo mooshin ay ku doonayaan in ay jawaabo kaga helaan Wasaarada Ganacsiga gaar ahaan qorsheyaasha uga degay mar-xaladan.
Khaadka Miiraha oo horey looga mamnuucay Britain iyo Holland ayaa suuqa kaliya ee u haray waa Soomaaliya kaasoo safmareenka Covid-19 awadiis ay mamnuucay xukuumada Muqdisho, wallow tuhun uu jiro.
Gudoomiyaha ayaa tibaaxay in mudanaha koonfurta Igembe ee John Paul Mwirigi uu dhankiisa u gudbin doono baarlamaanka dalab ku saabsan in Wasaaradaha Beeraha, Ganacsig, Gaadiidka iyo Arrimaha Gudaha iyo Dibada ay sharaxaan talaabooyinka uga qorsheysan in khaadka uusan wasaqoobin.
Victor Karithi, hogaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya, ayaa ku dhawaaqay isu soo bax dadweyne si dowlada ugu qasbaan in ay talaabo qaado, isagoo ku dhaliilay dowladda Uhuru Kenyatta in ay ka gaabineyso xalka.
Sikastaba ha ahaatee, waxaa muuqaneysa in Uhuru uu kusii kordhayo cadaadiska ka dhashay go'aanka xayiraada Soomaaliya ee khaadka waddankaa, talaabadaas oo madaxweyne Farmaajo ku goobayo dano siyaasadeed u gooniya.
Shirkan ayaa kusoo beegmaya xilli Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxeeyo muran dhanka Badda...
Uhuru oo lagu booriyey in uu ku daydo talaabo ay qaadey Soomaaliya
Afrika 26.08.2020. 16:10
Natiijada tirokoobka: Tiradda guud ee shacabka Kenya oo la shaaciyay
Afrika 04.11.2019. 12:21
Uhuru: Weerarka Hotel Dusit waa lasoo afjaray, dableyda waa la dilay
Afrika 16.01.2019. 11:33
Shan waxyaabood oo uu Uhuru sameeyo si uu waqtiga isku dhaafiyo
Afrika 26.05.2019. 13:51
Wasiir ka tirsan Xukuumada Khayre oo ka hadlay Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya [AKHRI]
Soomaliya 17.02.2019. 18:34